UNGAYENZA NJANI ISEBENZE IPLUTO TV (2021) - ITHAMBILE
Uyenza njani isebenze iPluto TV
Mhlawumbi inye kuphela into eyenza ukuba abasebenzisi boyike kwiqonga elikhulu lokusasaza njengeNetflix zizicwangciso zokubhalisa ezinamaxabiso. Nangona kunjalo, ungathini xa uthe wakhubeka kwi-app ebinamawakawaka eemovie kunye nemidlalo yeTV simahla. Unokunyanzelwa ukuba ungakuhoyi oku njengeqhula, kodwa enyanisweni kunokwenzeka ngePluto TV. Ukuba ufuna ukufumana iiyure ezingamakhulu zokusasaza ngaphandle kwentlawulo, nantsi isikhokelo sokukunceda ubone indlela yokuvula iPluto TV.
Yintoni iPluto TV?
Ngaba kufuneka ndenze iPluto TV isebenze?
Indlela yoku-1: Yenza iPluto TV isebenze kwi-Smartphone
Indlela yesi-2: Sebenzisa iNkonzo ngeChromecast
Indlela yesi-3: Qhagamshela kwi-Firestick yeAmazon kunye nezinye iiTV zeTV
IPluto TV yinkonzo ye-OTT yokusasaza efanayo neNetflix, iAmazon Prime kunye neDisney Plus. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nezi nkonzo, IPluto TV isimahla kwaye ivelisa ingeniso esekwe kwintengiso. Kunye nezihloko ezifanelekileyo zokuzinkcinkca ngotywala, amaqonga abonelela nge-100 + yamajelo e-TV aphilayo, anika abasebenzisi amava apheleleyo eTv. Ukongeza i-cherry kwikhekhe, i-app isebenziseka lula kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye inika abasebenzisi ithuba lokukhetha inkonzo ehlawulwayo. Ukuba ezi zinto zivakala zilungile ngokwaneleyo kuwe, nantsi indlela onokuthi wenze ngayo qhagamshela iPluto TV kwizixhobo zakho.
Ukwenza kusebenze kwi-Pluto TV yinkqubo enzima kancinci. Njengenkonzo yasimahla, iPluto ayifuni kusebenze ukusasaza amajelo kunye nemiboniso . Inkqubo yokusebenza yayikukuvumelanisa izixhobo ezininzi kuphela kunye nokusebenzisa izinto ezinje ngeemfuno kunye nemiboniso ethandiweyo . Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, inkqubo ibiyimfuneko ukuba kufuneka usebenzise iPluto TV kwizixhobo ezininzi. Ngelixa usebenzisa iPluto TV kwisixhobo esitsha, uya kufumana ikhowudi kwiakhawunti yakho yePluto. Le khowudi kufuneka ifakwe kwisixhobo sakho esitsha ukuze ivumelanise zombini.
cima uhlaziyo olulindelekileyo windows 10
Nje ukuba iPluto TV inike abasebenzisi ithuba lokusayina kunye nokwenza iakhawunti yabo, inqaku lokuvula alisekho. Ke ngoko, ukwenziwa ukuba kusebenze kwi-Pluto TV ngokuyintloko kwenza iakhawunti kunye nokubhalisa njengomsebenzisi oqinisekisiweyo.
Uhlelo lokusebenza lwe-Pluto TV lunokukhutshelwa kwiVenkile yeGoogle Play yeVenkile yeApple kunye neApple ye-iPhone. I-Pluto TV yinkqubo yasimahla kwaye ayifuni nayiphi na inkqubo yokwenza ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, unokwenza iakhawunti eqongeni kwaye ubhalise njengomsebenzisi osisigxina.
1. Kwivenkile yokudlala, Khuphela ifayile ye IPluto TV usetyenziso kwisixhobo sakho.
susa ibar yokukhangela kuGoogle
2. Vula usetyenziso kwaye itephu kwi Imenyu yezicwangciso kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Ukuvula ngokupheleleyo iPluto TV, shaya 'Bhalisela Simahla.'
Zine. Faka iinkcukacha zakho kwiphepha elilandelayo. Inkqubo yokubhalisa ayifuni lwazi lwekhadi letyala, ukuqinisekisa ukuba awulahlekelwa yiyo nayiphi na imali.
5. Yakuba yonke ingcaciso ifakiwe, cofa ku 'Bhalisa, kwaye iPluto TV yakho iyakwenziwa isebenze.
windows 10 uhlaziyo aluphumelelanga ukufaka i-1903
Funda kwakhona: Iinkqubo ezi-9 eziSimahla zokuSasaza iiMbali
Enye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisa iPluto TV kukuyiphosa ngeChromecast yakho kwaye uyibukele kwiTV yakho. Ukuba unesixhobo seChromecast kwaye ufuna ukonwabela umgangatho kamabonwakude, nantsi indlela onokuthi usebenze ngayo iPluto TV ngeChromecast.
1. Kwisikhangeli sakho, yiya kwi iwebhusayithi esemthethweni ye IPluto TV
2. Ukuba sele wenze iakhawunti, Ngena usebenzisa iziqinisekiso zakho okanye usebenzise uhlobo olungabhaliswanga.
3. Yakuba idlalwe ividiyo, cofa kumachaphaza amathathu kwicala lasekunene lesikhangeli sakho seChannel.
Ukusuka kuluhlu lwezinto ezinokubakho, cofa ku 'Sakaza.'
5. Cofa kwisixhobo sakho seChromecast, kunye neevidiyo ezivela kuPluto TV ziya kudlala ngokuthe ngqo kwiTV yakho.
Nje ukuba uqonde iziseko zePluto TV, ukuyivula nakwesiphi na isixhobo kuya kuba lula kakhulu. Unokuzikhuphelela usetyenziso ngokusebenzisa y iAmazon Firestick TV yethu kunye nezinye iiTV ezikrelekrele, kwaye iya kusebenza ngaphandle komthungo. Nangona kunjalo, ukuba iakhawunti yakho ye-Pluto TV ayenziwanga isebenze ngokusayina kwaye iapp ifune ikhowudi, nantsi indlela onokuthi wenze ngayo iPluto TV kwisixhobo sakho.
1. Kwi-PC yakho, intloko uye ezantsi Pluto yovulo iwebhusayithi
2. Apha, khetha isixhobo ufuna ukwenza iPluto TV isebenze.
3. Xa isixhobo sikhethiwe, a Ikhowudi enamanani ama-6 iya kuvela kwiscreen sakho.
chrome isebenzisa i-cpu eninzi
4. Buyela umva kumabonakude wakho, kwindawo engenamanani, ngenisa ikhowudi ufumene nje.
5. Uya kuba ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-Pluto TV, kwaye ungonwabela yonke imiboniso bhanyabhanya kunye neemovie zasimahla.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo (FAQs)
ukulungisa indlela windows 10 zokusebenza ezingavuli
Q1. Lithini iqhosha lokuvula kwiPluto TV?
Ukwenza kusebenze kwi-Pluto TV ngokuyintloko kudala iakhawunti kwaye ubhalisela inkonzo. Ungasebenzisa onke amanqaku eqongeni ngokungena kunye neenkcukacha zakho zeakhawunti kwizixhobo ezahlukeneyo.
Umbuzo Ndiyenza njani isebenze iPluto TV kwiRoku?
I-Roku yenye yeqonga elizayo le-TV elixhasa uluhlu olubanzi losasazo kunye nee-OTT. Unokuzikhuphelela usetyenziso lwePluto TV kwiRoku kwaye ungene ungene ukuze ubukele imiboniso bhanyabhanya oyithandayo kunye neemovie. Ngenye indlela, ungatyelela eli khonkco: pluto.tv/activate/roku kwaye wenze iPluto TV isebenze kwiRoku usebenzisa ikhowudi enamanani ama-6 ebonelelweyo.
Lungisa uMthombo weChromecast awusekelwanga uMba kwisiXhobo sakho
Iindlela ezi-6 zokudibanisa ifowuni yakho ye-Android kwiTV yakho
Utshintsha njani uhlobo lwe-NAT kwi-PC
Ungazivimba njani iiNtengiso kwiCrunchyroll yasimahla
Ukwenza kusebenze kwi-Pluto TV kube yinto enengxaki kangangexesha elithile . Nangona inkonzo ithathe amanyathelo amaninzi okuqinisekisa ukwenziwa komsebenzi ongenamthungo kubasebenzisi bayo, uninzi alunakho ukusebenzisa iPluto TV ukuya kwinqanaba eliphezulu. Nangona kunjalo, ngamanyathelo akhankanywe apha ngasentla, kuya kufuneka ujongane neengxaki ezininzi kwaye usebenzise iqonga ngokulula.
Siyathemba ukuba esi sikhokelo siluncedo kwaye nibe nako yenza iPluto TV isebenze . Ukuba usenayo nayiphi na imibuzo ngokubhekisele kweli nqaku, zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
iifestile ezili-10 zingama-99
vumela i-hibernate kwiwindows 10
Ukuphucula windows 10 99%
Iphi ifolda endala yeewindows
windows 10 uhlala kwisikrini esamkelekileyo
Ukubuyisela iphasiwedi kwakhona simahla windows 10